(Manchester) 28 Nof 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United waxa ay aamisan tahay in macallin Ralf Rangnick uu u soo gacan gelin karo Weeraryahan Erling Haaland.
Macallinka cusub ee Manchester United, Ralf Rangnick kaasoo lagu wado inuu dhawaaq la wareego shaqada kooxdaa ayaa da’yarka reer Norway waxa uu kula soo shaqeeyey RB Salzburg isagoo aad u dhallin yar.
Jariiradda The Mirror ayaa daabacday in Kooxda Manchester United ay ku xisaabtamayso saamaynta Ralf Rangnick si uu uga caawiyo soo xero galinta Erling Haaland xagaaga soo socda.
Rangnick, kaasoo dhawaan la wareegi doona xilka Macallinimo ee kooxda ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkaan ayaa si wanaagsan u yaqaanna xiddiga reer Norway, waxaana isagoo da’yar uu u saxiixay RB Salzburg sanadkii 2019-kii.
Erling Haaland ayaa 50 gool dhaliyey 50 kulan oo uu ciyaaray horyaalka Bundesliga, kaddib markii uu dhaawac ka soo laabtay lix isbuuc kaddib.
Wax ka ogow noloshii adkeyd ee Goolhayaha Kooxda Chelsea Edouard Mendy... (Maxaa ka jira inuu Yaanyo goobeyn jiray? Mise la socotaa in Wakiilkiisu uu Taleefanka ku dhegeystay?)